कम्प्युटरहरू, अपरेटिङ सिस्टमहरू
विन्डोज7को केहि प्रयोगकर्ताहरू स्थापित अपरेटिङ सिस्टमको जगेडा प्रतिलिपि सिर्जना जस्ता जस्ता धेरै उपयोगी सुविधाको बारेमा जानकारी छन्। यो के छ र कसरी Windows7को जगेडा प्रतिलिपि बनाउन हामी यहाँ र अब विश्लेषण गर्नेछौं।
यो प्रकार्य के हो?
ब्याकअप अपरेटिङ सिस्टमको प्रकार्य हो, जुन अभिलेख उपकरणको मद्दतले प्रयोगकर्ताको जानकारी र OS को पूर्ण रूपमा एक ब्याकअप प्रतिलिपि सिर्जना गर्न सक्दछ। यसबाट धेरै फायदाहरू छन्, किनभने यसको मद्दतले तपाईँले ओएसको छवि बनाउन सक्नुहुन्छ जुन तपाईले क्षतिग्रस्त अपरेटिङ सिस्टम पुनर्स्थापित गर्न सक्नुहुनेछ। यदि रिकभरी पोइन्ट सिर्जना भएको छैन भने यो वास्तविक जीवन रेखा हुनेछ र तपाईं रोलब्याक गर्न सक्नुहुन्न। बेशक, रिकभरी पोइन्ट ओएसस को क्षति को मामला मा गर्न को लागि पनि वांछनीय छ, तर विभिन्न पुरानो स्थितियां हो जसमा राम्रो पुराना पुराना रोबैक मदद गर्दैन। उदाहरणको लागि, जब प्रणाली सुरु हुँदैन, तर डिस्क7मा लिइएको डिस्कमा छैन।
किन रोलब्याक छैन?
रोलब्याकको विपरीत (बहाल प्रकार्य फरक छ), जसले मात्र प्रणालीलाई अघिल्लो बचत गरिएको अवस्थामा फर्काउँछ, जगेडा प्रयोगकर्ता प्रयोगकर्ता प्राथमिकताहरू र विन्डोज7छवि सम्पूर्ण रूपमा बचत गर्दछ। यो लाभ ठूलो छ। उदाहरणका लागि, विन्डोज7पुन: स्थापना गरेर , तपाईले पुन: स्थापना प्रक्रियाको बेला मेटिने सबै प्रयोगकर्ता डेटा पुनर्स्थापित गर्न सक्नुहुनेछ।
र यदि अपरेटिङ सिस्टम असफल भएमा, यो जहिले पनि सामान्य अवस्थामा पुनः बहाल गर्न सकिन्छ, यसको अलावा, चालकहरू, प्रोग्रामहरू र व्यक्तिगत डेटा (बचत र खेलहरू, आदि।) पनि पुनर्स्थापित गरिनेछ।
म कसरी Windows7जगेडा गर्छु?
अपरेटिङ सिस्टमको प्रतिलिपि सिर्जना गर्ने एकदम ठूलो संख्या हो। यसको अतिरिक्त, विन्डोज7यसका लागि पर्याप्त कार्यक्षमता छ। विन्डोज7को जगेडा सिर्जना गर्नु अघि, तपाईंले निम्न चालहरू गर्न आवश्यक छ।
हामी स्टार्ट मेनुमा हिंड्छौं, जहाँ "सबै कार्यक्रमहरू" मा हामी "रखरखाव" पिता खोज्दै छौं। यसमा हामी फेला पार्छौ र "ब्याकअप र पुनर्स्थापित" वस्तुमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ यो प्रकार्य खोल्ने वैकल्पिक तरिकाहरू पनि छन्:
"सुरू गर्नुहोस्" खोल्नुहोस्, खोजी रेखामा प्रविष्ट गर्नुहोस् "ब्याकअप र पुनर्स्थापना" र जब देखा पर्दछ;
हामी नियन्त्रण प्यानलमा जान्छौं, जहाँ "ब्याकअप र पुनर्स्थापित" सेक्सनले तुरुन्तै तपाईंको आँखालाई समात्छ।
यसले कुनैपनि कुरालाई खोल्न सकिँदैन जुन कुन उद्घाटन विधि छान्नेछ, मुख्य कुरा यो सेवाको साथ सञ्झ्याल खुल्ला छ। त्यहाँ तपाइँ तीन कार्यहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ:
जगेडा सेट अप गर्नुहोस्;
OS छवि सिर्जना गर्नुहोस्;
प्रणालीको सामान्य स्थितिमा फर्किने डिजाइन गरिएको डिस्क सिर्जना गर्नुहोस्।
सायद, हामी कसरी Windows7को जगेडा प्रतिलिपि सिर्जना गर्न सुरु गर्नेछौं, त्यसपछि अन्य दुई प्रकार्यहरू विचार गर्नुहोस्।
यसो गर्नका लागि हाइलाइट गरिएका नीलो हाइपरलिंकमा "ब्याकअप र पुनर्स्थापित" बक्समा क्लिक गर्नुहोस् "ब्याकअप कन्फिगर गर्नुहोस्"। ब्याकअप सेटिङ सन्झ्याल देखा पर्दछ। यस चरणमा, तपाईं थोडा प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। "जगेडा सेटिङ" नामक सञ्झ्यालको उपस्थितिको साथ धैर्यलाई पुरस्कृत गरिनेछ, जहाँ तपाइँ प्रतिलिपि बचत गर्ने स्थान छनौट गर्न प्रस्तावित गरिनेछ। निस्सन्देह, तपाईं डिस्क डीमा एक रिजर्व सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ, उदाहरणका लागि। तर घटनामा हार्ड ड्राइभको सबै डेटा मेटाईयो वा क्षतिग्रस्त हुन्छ, त्यसपछि जगेडाबाट कुनै पनि अर्थ हुनेछैन। यसैले, बाह्य हार्ड ड्राइभमा रिजर्व भण्डारण गर्न सर्वोत्तम हो। यसको अतिरिक्त, यदि तपाइँ बाह्य हार्ड ड्राइभ जडान गर्नुहुन्छ भने, प्रणालीले Windows7प्रणालीको जगेडा प्रतिलिपि बनाउन भन्दा बढी केहि प्रस्ताव गर्नेछैन। जब चयन गरिन्छ, अर्को "बटन" सँग जारी राख्नुहोस्।
अर्को विन्डोमा तपाइँलाई छनौट गर्न आवश्यक छ, फाईलहरूको चयन छोड्नुहोस् Windows Archiving वा कुन डाटा संग्रह गरिनेछ (व्यक्तिगत फाइलहरू, फोल्डरहरू, डिस्कहरू)। वैसे, यस सुविधाले कसरी ब्याकअप विन्डोज7चालकहरूमा मद्दत गर्न सक्दछ।
यदि अपरेटिङ सिस्टममा कुनै भरोसा छैन भने, र त्यसमा म्यानुअल रूपमा डेटा वितरण गर्न निर्णय गरिएको थियो, विन्डो सञ्झ्यालमा यो "डिस्क प्रणाली छवि समावेश गर्नुहोस्: (सी) समावेश गर्नुहोस्" क्लिक गर्न आवश्यक छ, ताकि तपाइँ रिजर्भ प्रयोग गरेर गलत प्रणाली पुनर्स्थापित गर्न सक्नुहुन्छ, र पक्षीहरूलाई आवश्यक डेटालाई ध्यान दिनुहोस्। परम्परा अनुसार, "अर्को" मा क्लिक गर्नुहोस्। विन्डोज7को जगेडा प्रतिलिपि गर्नु अघि हामी सबै सेटिङहरूको सहीता जाँच गर्छौं। पछि - "बचत गर्नुहोस् र चलाउनुहोस्।"
ओएस छवि सिर्जना गर्नुहोस्
यो समय हामी Windows7डिस्कको जगेडा प्रतिलिपि कसरी गर्ने भनेर फाडको सट्टा "छवि सिर्जना गर्नुहोस्" मा क्लिक गर्नुहोस्। यस अवस्थामा, एउटा छवि सिर्जना गरिएको छ जुन ओएसको सामान्य अपरेसनको लागि आवश्यक डिस्कहरू समावेश गर्दछ। हामी भविष्यको छविको स्थान चयन गर्न विन्डोमा छौं। यो पोर्टेबल (बाह्य, बाह्य) हार्ड ड्राइव छान्नु भन्दा राम्रो छ, किनकि छविले धेरै दसौं वजन लगाउन सक्छ, र ग्यागबाइट्स पनि सैकड़ों। अर्को, डिस्क सिर्जना गर्ने छविबाट चयन गर्नुहोस्। अर्को विन्डोमा, हामी फेरि छविमा हुनेछ डिस्कहरू जाँच गर्नुहोस्, त्यसपछि "अभिलेख" मा क्लिक गर्नुहोस्।
पुनःप्राप्ति डिस्क सिर्जना गर्नुहोस्
यो त्यहाँ भयो, त्यस्ता वस्तुको सट्टा Windows7को जगेडा प्रतिलिपिको रूपमा, केवल यो छवि सिर्जना बटनको छेउमा अवस्थित छ। तथापि, यो कदम आवश्यक छ जो डिस्क मा विन्डोज7को लागि आवश्यक छैन, र यो यसको उपयोग गर्न को लागी प्रणाली को सामान्य स्थिति मा फर्कन सक्छ। ती डिस्कहरूसँगको लागि, यो प्रक्रियाको माध्यम जान्न उपयोगी छ, किनकि OS को गम्भीर क्षतिको अवस्थामा, यो पुन: स्थापित गर्न आवश्यक हुनेछ।
यो गर्नका लागि, तपाईंलाई रिक्त डीभिडी वा सीडी-रोम चाहिन्छ, किनकि रिकभरीका लागि फाइलहरू लगभग 150 एमबी वजन हुनेछ। "बैकअप र पुनर्स्थापित" सन्झ्यालमा, "प्रणाली डिस्क सिर्जना गर्नुहोस्" मा क्लिक गर्नुहोस्। हामी डिस्कमा डिस्क घुसाउनुहोस्, सूचीबाट यसलाई चयन गर्नुहोस् र "डिस्क सिर्जना गर्नुहोस्" बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। हामी डिस्क सिर्जना प्रक्रियाको अन्त्यमा पर्खिरहेका छौं, पछि हामी डिस्क बाहिर लैजान्छौं।
अब यो डिस्क प्रयोग गर्न सकिन्छ जब अपरेटिङ सिस्टम लामो समयको लागि बाँच्न सकिन्छ, र यो सुरक्षित मोडबाट यसलाई प्रविष्टि गर्न सम्भव छैन।
प्रणाली क्षमता को प्रभाव के हो?
के यो ल्याप्टपमा विन्डोज 10 स्थापना गर्ने लायक छ?
Windows7कसरी स्थापना गरेर आफैलाई फ्लैश ड्राइवबाट
"विन्डोज 8": प्रयोगकर्ता र प्रोग्रामरहरूको समीक्षा। विन्डोज 8 को प्रो र कन्सोर्स
चाड झण्डा वर्णन, प्रतीकात्मक रूप, सृष्टिको इतिहास। रोमानिया र चाड विभिन्न झण्डा?
कुन परी कथामा टेबलक्लट-आत्म-ट्याप र कसरी भनिन्छ
तला टोफु। खाना पकाउनु प्रेम गर्नेहरूलाई लागि व्यञ्जनहरु
बच्चाको बोली कसरी विकास गर्न। युवा आमाबाबुको लागि सुझावहरू
TPO एंटीबडी एंटीबडी
ताप radiators पेंट: विशेषताहरु